Ma ogtahay inay jirto Bomatada guska ragga buurisa - iftineducation.com
Ma ogtahay inay jirto Bomatada guska ragga buurisa
iftineducation.com – Waxaa jira bomaato la marsado xiliga galmada naagta, marka la mariyo guska aad buu u bararaa, wuxuu noqonayaa mid weyn oo dheer.
Bomaatadaas waxaa lagu magacaabaa Ramilaat, kareemkan marka geedka ninka la mariyo aad buu u weynaadaa wuuna dheeraada.
Naagta u baahan ninkeeda inuu si fiican ugu raaxeeyo kareemka malabyarowga weyneeya ha uu keento, galmada uu samayn doono ma ilaawi doonto, karemkan waxaa laga helaa farmashiya kasta caalamka ku taalo.
Wuxuu ka samaysan yahay waxyaalo dabiici ah oo jirka u roon, waxaa la sheegaa naagaha badankooda inay u baahan yihiin geedka buuran oo siilkooda buuxin kara, macaan daran bay dareemaysaa naagta marka loo galiyo geed alaabteeda buuxinaya, bomaatada bahalka weynaysa aad bay ugu fiican tahay dadka bahalka yar, sidoo kale waxaa jira kaniini geeda weyn ka dhiga.
Hal kaan ka baro Istiinka dhuuqida afka qaabka ugu raaxo badan